Vaovao - Mifantoka amin'ny fananganana toe-tsaina ekipa avo lenta izahay
Fiara mitondra fiara
Scania Auto Parts
MB Auto Parts
DAF Auto Parts
Iveco Auto Parts
Hino Auto Parts
Mifantoka amin'ny fananganana toe-tsaina ekipa avo lenta izahay
Ny lanjan'i Ningbo Zodi dia ny fananganana toe-tsaina ekipa avo .Nanao fitsidihana roa andro tao amin'ny distrikan'i Maoyang, Xiangshan izahay tamin'ny 20 aogositra, nandritra ireo andro nankafizanay ny hazandranomasina sy ny fitetezana morontsiraka. Miala sasatra amin'ny asa be ataonao mba hankafizanao ny fiadanan'ny natiora. Mijanona tontolo andro izahay hatramin'ny maraina ka hatramin'ny alina miaraka amin'ireo mpiara-miasa sy fianakaviana, mankafy ny fiainana mahafinaritra eo anilan'ny miasa the
Amin'ny lafiny iray, ny ekipa dia hizara fahalalana samihafa ho an'ny mpiasa rehetra mampiasa PPT sy fampisehoana santionany, koa manasa ireo manampahaizana momba ny ozinina hanatsara ny fampahalalana bebe kokoa (ao anatin'izany ny fitaovana, ny tsipika famokarana, ny teknolojia famokarana, ny fomba fitsapana, ny fitsaboana ambony, ny fonosana, ny fandefasana, ny vidiny sns …) .Raha mampiseho ny refy, manatsara ny fahalalantsika matihanina izany ary manatsara ny fahatokisantsika tena.
Eken'ny besinimaro fa ny miasa tsy miankina dia manana tombony miharihary fa afaka manaporofo ny fahaizan'ny olona iray. Na izany aza, mino aho fa ny fiaraha-miasa dia zava-dehibe kokoa amin'ny fiarahamonina maoderina ary ny fanoratana ekipa dia nanjary kalitao takian'ny orinasa maro kokoa.
Voalohany, miorina amin'ny fiarahamonina saro-bahana isika ary matetika no tojo olana mafy izay tsy takatry ny saintsika. Indrindra indrindra amin'izao fotoana izao dia manaporofo fa tena zava-dehibe tokoa ny fiaraha-miasa. Miaraka amin'ny fanampian'ny ekipa, ireo olana ireo dia azo vahana mora sy haingana, izay mety hanatsara ny fahombiazan'ny asa.
Amin'ny laharana faharoa, ny fiaraha-miasa dia manome vahana hiara-hiasa amin'ny mpiara-miasa aminy, hahatonga azy io hanana tontolo iainana mahafinaritra sy mahafinaritra, izay singa iray lehibe mitaona ny finoan'ny mpiasa ny orinasa ho toeram-piasana tsara.
Ary farany, ny fiaraha-miasa dia manampy amin'ny fanambinana ireo orinasa. Miaraka amin'ny fahalalan'ny mpiara-miasa rehetra, ny orinasa dia manana fahombiazan'ny asa be sy fahaizana hiatrika izay olana rehetra. Vokatr'izany dia afaka mahazo tombony bebe kokoa ireo orinasa ary hivoatra haingana kokoa.
Raha fintinina dia zava-dehibe ny fiaraha-miasa, tsy misy olona afaka miaina samirery, tsy maintsy miantehitra amin'ny hafa amin'ny lafiny sasany izy ireo. Noho izany, ny fiaraha-miasa dia afaka manamora ny fiainana. Mba hihaona amin'ny filan'ny fanatsarana manokana sy ny fiaraha-monina be pitsiny. Tokony hianatra hiara-hiasa sy hifanaraka isika. Amin'izany fomba izany no ahafahantsika mahita fahombiazana sy hanome fahafaham-po ny tenantsika ary koa hanomezana fahafaham-po ny tenantsika ny fiarahamonina.
Fotoana fandefasana: Sep-30-2020
Adiresy: No.6 Lixin Road, faritra misy ny indostria Xiaogang, Tongtu Road, Ningbo, Zhejiang, Sina